‘बलात्कारीलाई फाँसी दे’ भन्दै धनुषामा चक्का जाम, पीडित बालिकाको स्वास्थ्य स्थिती गम्भिर, थप उपचारको लागि काठमण्डौं लगियो – Shirish News
‘बलात्कारीलाई फाँसी दे’ भन्दै धनुषामा चक्का जाम, पीडित बालिकाको स्वास्थ्य स्थिती गम्भिर, थप उपचारको लागि काठमण्डौं लगियो
महेन्द्रनगर- बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय माग गर्दै धनुषाको महेन्द्रनगरमा आज दिन भरि प्रदर्शन गरिएको छ।
ढल्केवर–जनकपुर राजमार्गको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका ५ महेन्द्रनगर सडक खण्डमा टायर बाली सडक अवरुद्ध गरि बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय माग्दै चक्काजाम गरिएको थियो ।
गत वैशाख १५गते आइतबार क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका ५ महेन्द्रनगरमा एक १४ बर्षीया बालिकालाई घरमा कोही नभएको बेला ३३ बर्षीय राजकुमार साहले बलात्कार गरेको थियो । बलात्कृत बालिकाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ ।
पीडित परिवारजनले वैशाख १६गते दिएको किटानी जाहेरीको आधारमा पीडक साहलाई प्रहरीले पक्राउ गरि जबरजस्ती करणको मुद्दा चलाएको इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका इन्चार्ज अमिर दाहालले जनाएको छ ।
यता पीडित परिवारजन र स्थानीयले बलात्कारीलाई छिटो भन्दा छिटो कार्वाही सहित फाँसीको सजाय माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनमा उत्रेकाहरुले कतै कुनै प्रलोभन र घटना मिलाउने प्रयास कतैबाट नहोस् भन्ने हिसाबले समेत प्रदर्शन गरिएको बताए ।
यता पीडित बालिकाको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिदै गएको हुनाले थप उपचारको लागि काठमाण्डौं पठाइएको छ ।
घटना पश्चात बालिकालाई उपचारको लागि जनकपुरको धनुषा अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टरमा भर्ना गरिएको थियो । तर त्यहाँ स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार नआएको झन अवस्था बिग्रिदै गएको हुँदा थप उपचारको लागि काठमाण्डौं पठाइएको हो ।
उपचारमा सँलग्न डा. संजीव गोईतका अनुसार बालिकालाई छिन छिन बेहोस हुने गरेको र मानसिक रुपमा भित्रै देखि डराएको कारण डिप्रेशनमा जाने सम्भावना रहेको छ ।
धनुषा अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि पीडित बालिकालाई थप उपचारको लागि काठमान्डौँको हो । यस सन्दर्भमा अनुसन्धानमा सलग्न डिएसपी ज्ञान कुमार महतोले थप उपचारको लागि बालिकालाई बिएण्डबी हस्पिटलमा रिफर गरिएको बताए ।
डिएसपी महतोले भने, ‘हामी यस घटनालाई सुक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरिरहेका छौं । घटनाका प्रकृति र घटना स्थलको प्रकृति मुचुल्का हेर्दा बलात्कार भए कै हो , अब पक्राउ गरिएका अभियुक्तसँग भेजाइनल स्वायब म्याच गरेपछि केही भन्न सकिन्छ । प्रहरीको तर्फबाट अनुसन्धान जारी छ । दोषीलाई हदै सम्मको कार्वाही हुन्छ ।’
यस अघि शुक्रवार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जनकपुरका टोलीले बलात्कार घटनाको सन्दर्भमा चासो राखि अनुगमन समेत गरेका छन् ।
आयोगका मानवअधिकार अधिकृत रेखा दत्त नेतृत्वको टोलीमा र्ईन्सेक प्रदेश २ संयोजक राजु पासवान, इन्सेक महोत्तरी प्रतिनिधि अजय शाह, वोरेक धनुषा संयोजक रोजलिन बच्छार, महिला अधिकारकर्मीहरु जमुना भुजेल र मीना के.सी. सहितले पीडित परिवार संग भेटघाट गर्नुको साथै घटना स्थल र घटना बारे जानकारी लिएका थिए ।
उक्त टोलीले इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका इन्चार्ज इन्स्पेक्टर अमिर दाहाल संग भेट गरि दोषी उपर कार्वाही प्रकृयाको अवस्था बारे समेत जानकारी लिएका थिए ।
सो क्रममा पीडित परिवारले पीडित बालिकाको स्वास्थ्य अवस्था ठीक नरहेको र बालिका छिन छिनमा मुर्छा पर्ने, बोल्न नसक्ने, रुने कराउने गरेकोले हाल सम्म उपचारार्थ अस्पताल भर्ना गरिएको जनाए । बालिकाको उपचार अहिले जनकपुर स्थित एक निजि नर्सिङ्ग होममा भईरहेको पीडित परिवारबाट जानकारी भए पश्चात टोलीले अस्पताल मै गएर उनको स्वास्थ्य अवस्था बारे समेत चिकित्सक संग जानकारी लिएका थिए ।
त्यसैगरी इप्रका महेन्द्रनगरका इन्चार्ज ईन्स्पेक्टर दाहालले पीडित पक्षले वैशाख १६गते दिएको किटानी जाहेरीको आधारमा मुद्दा दर्ता गरि सोहि दिन पीडक ३३ वर्षीय राजकुमार साहलाई गिरफ्तार गरिएको बताए । उनले पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परिक्षण जनकपुर अंचल अस्पतालमा गराईएको र पीडक साहमाथि जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दा चलाईएको जानकारी दिए ।
अनुगमन टोलीले पीडित परिवारलाई मानवअधिकारकर्मीहरु न्याय दिलाउन साथसाथै रहेको बताउँदै दोषिलाई कानुनी कार्वाहीको प्रकृयाबाट पछाडि नहट्न आग्रह समेत गरे ।
यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम [पूर्णपाठ]